Izityalo zangaphakathi: isundu somthi
UGenus Phoenix (isiLatini Phoenix L.) udibanisa iindidi ezili-17 zityalo kwiintsapho zemithi yesundu. Abameli beli gama baqhelekile kwiindawo ezisemathonjeni kunye nama-tropical ase-Asia kunye ne-Afrika. Igama legama elithi "phoenix" liguqulelwe ukusuka kwisiLatini njenge "palm". Kwaye, eneneni, imihla iyimithi yesundu kunye neqela elilodwa. Ephezulu, isiqu sithweswe isithsaba samagqabhagqabha, kwaye kunye nobude obude buhlanganiswe kunye neentsike ze-petioles kunye namagqabha e-vagina.
Amagqabi amakhulu omfanekiso obomvu, ongaqhelekanga-pinnate. Amaqabunga afumaneka ngokusemthethweni okanye kwisixuku. Ziqine, ziboshwe, zikhombise, kwisiseko (ngamanye amaxesha zihamba kunye nobude obude) zipheleleyo, zibe nomfanekiso oqhelekileyo we-lanceolate. I-petiole emfutshane i-flat-convex, kwisiseko seqabunga inezihluma ezinamandla endaweni yelobes. I-inflorescence ikhona kwi-axils yamacembe.
I-Finik iyalinywa njengesiqhamo somthi, umzekelo, i-palmate yesihlahla, kunye ne-plant ornamental plant. Amaqabunga asemagqabini asetyenziswa kwiinjongo zonyango ekwenzeni unyango, izifo ezithintekayo nezikhumba. Amagqabi asetshenzisiweyo asetyenziselwa ukulungiselela ukunyanzeliswa.
Iifom ezincinane zemihla, njengeRobelen kunye neCanary, zikhulile kwiiholo, iiofisi kunye neendawo zokuhlala. Khumbula ukuba ukubonakala komnwe kukhula ngokukhawuleza kwaye igumbi lincinci kuye. Ezi zityalo zifakwe kakuhle kwi-conservatory okanye i-conservatory.
Ukukhanyisa. Izityalo zangaphakathi zihlala zinyundu - izityalo ezifihlakeleyo, ukunyamezela ukukhanya kwelanga. Musa ukufaka umthunzi, ngaphandle kweeyure zemihla ngemihla ebushushu busika ehlobo.
Indawo. Kunconywa ukubeka ezi zityalo zangaphakathi kwiifestile zezantsi nakumazantsi-mpuma. Ukuze isithsaba sikhule ngokulinganayo, ngokukhawuleza ujike umhla ekukhanyeni ngamacala ahlukeneyo. Ehlobo, qiniseka ukuba uphumelele kwigumbi, apho kukho isundu. Ukuba kwakungekho iintsuku ezaneleyo kwixesha elibandayo, emva kwentwasahlobo kufuneka ufunde ngokukhawuleza umhla wokukhanya okukhulu kwelanga.
Oku kuya kunceda ukuphepha ukushisa ilanga kumaqabunga esi sityalo. Kunconywa ukuba kuqhutywe inkqubo efanayo yokulungelelanisa kunye nezityalo ezithengwa kwivenkile. Ebusika kunqweneleka ukufaka ukukhanya okongeziweyo kunye nezibane zetsholongwane.
Ulawulo lokushisa. Ehlobo nasekwentwasahlobo, xa isundu sisexesha lokukhula okusebenzayo, izinga lokushisa eliphezulu liyi-20-25 ° C. Izilwanyana zikhetha ukushisa okuphezulu, kodwa ukususela kumagumbi kukho umoya omile kakhulu, ngo-25-28 ° С imihla leyo iya kubuna magqabi. Ebusika, isityalo sinexesha lokuphumla apho ubushushu bucetyiswa ukuba bube ngu-15-18 ° C. Ngeenhlobo ze-Robelen, umda ophantsi weqondo lokushisa ngu-14 ° C, kodwa ukushisa okusemgangathweni ngu-16-18 ° C. Ezinye iintlobo, umzekelo weentsuku zeKarar, zinokuhamba nobushushu be-8- 10 ° С. Umhla weentende zinoyiko lokunyuka kwemoya, ngoko rhoqo qinisa igumbi ngexesha lonke lexesha. Khumbula ukuba umqulu, ngakumbi ebusika, ungonakalisa isityalo sakho.
Ukunisela. Ngentwasahlobo nasehlotyeni-eninzi, ekwindla nasebusika - ngokulinganayo. Phakathi kokuthambisa umgangatho ophezulu womhlaba kufuneka wome. Ebusika, amanzi emva kweentsuku ezingama-1-2 emva komphezulu we-substrate. Yiyeke umbane kwi-pan emva kokunisela, kodwa kungekho ngaphezu kwama-2-3 iiyure. Musa ukugqithisa okanye ukumisa umgca. Sebenzisa kuphela amanzi aphantsi aphantsi kunye ne-calcium ephantsi.
Ukuthotywa komoya. Umhla uyawuthanda umphezulu ophezulu, ngoko kuyacetyiswa ukuwufakela ukujikeleza unyaka wonke, usebenzisa amanzi ahlanjulweyo okanye amacandelo. Beka isityalo endaweni kunye nomswakama omkhulu womoya, ngokubalulekileyo kubalulekile ngomhla weRobelen. Ukwandisa umswakama, sebenzisa ipenethi kunye ne-claydite emanzi okanye i-moss, ibhodwe ayifanele ifuthe amanzi ngamanzi ayo. Ukuhlamba rhoqo amaqabunga omhla (ubuncinane kanye kwiiveki ezimbini).
Ukugqoka okuphezulu. Ukugqoka okuphezulu kufuneka kwenziwe rhoqo iintsuku ezili-10 ukususela ngo-Ephreli ukuya ekupheleni kuka-Agasti. Sebenzisa ii-organic fertilizers kule njongo, ukuzitshintsha nge-nitrate ye-potassium, ihlanjululwe kwisiqingatha se-10 grams kwi-10 ilitha amanzi. Ebusika, ungondli ngaphezu kwesinye ngenyanga.
Ukutshintshwa kwezityalo. Izityalo ezincinci isundu kufuneka zifakwe rhoqo, zikhulu - zifane. Qaphela, kuba umonakalo kwingcambu ephambili ngexesha lokutshintshwa kwegazi libulala lonke isityalo.
Ayikho imeko ayikwazi ukuhlawulela iintsuku ngexesha lokuwa. Ngeli xesha, izityalo zilahlekelwa ngamagqabi kwaye zingafa. Kubantu abadala bezityalo ezinkulu entwasahlobo, zenze ukuguqulwa kwimizuzu emi-4, kubantu abatsha - kanye ngonyaka. Ukukhula ngokukhawuleza kwintende kunqamle ukuba kutyalwa kuphela xa iingcambu ziqala ukungena kumbindi. Ukubeka indawo engaphezulu kwendawo yomhlaba (3-4 cm) kunye nomqolo omtsha, onomsoco unyaka ngamnye.
Umxube womhlaba we-palm palm ungathathi hlangothi okanye u-acidic. Sebenzisa umxube we-turf, i-compost, i-humus nesihlabathi kwiindawo ezilinganayo. Kunconywa ukuba ungeze i-superphosphate emhlabathini kwisantya se-1 isipuni nge-3 ilitha yomxube. Umxube wezorhwebo ofanelekileyo. Ngeentsuku ezongeziweyo, ungasebenzisa umxube onzima, apho umhlaba we-sod ukwanda. Ukutyala kweentende kwiintonga ezinzulu, umjelo omhle unyanzelekile.
Isityalo singakhula ngokwemvelo.
Ukupapashwa ngembewu. Umhla wesithambo kufuneka ugcinwe iintsuku ezingama-2-3 emanzini afudumele ukuya ku-30-35 ° C, kwaye utyalwe kwisigxathu se-sand-peat and create a temperature of 22 ° C. Abanye basebenzisa i-substrate ihlukaniswe ngamacandelwana: ngaphantsi kwinqanaba lokuhambisa amanzi, ukuya kwi-1/2 ebhodweni, ngentla - isanti kunye nama-moss aqoshiwe.
Ingcambu kufuneka ihlanjwe, ifake imbewu kuyo, igubungele nge-moss otyumkileyo okanye isanti. Amahlumela avela emva kweentsuku ezingama-20-25. Ukuze uphumelele ukuhluma, yakha izimo ezilandelayo: ukuthambisa rhoqo, ukushisa okuphezulu kwi-20-25 ° C. Ukuhluma ukusetyenziswa kweziqhamo ezintsha, njengokuba ngexesha lokugcina ukuhluma kwembewu kuwela, kuhluma, kungabikho mhle kulo nyaka. Emva koko izityalo zitshintshwe ngobumnene kwaye zinyanzeliswe ngomhlaba umxube wezinto ezilandelayo: ii-2 izingxenye zokukhanya, 1 inxalenye yeqabunga, 1 inxalenye yomhlaba we-humus kunye nenxalenye yesihlabathi. Amanzi izityalo ngobuninzi, usebenzisa amanzi afudumele kuphela, zifake kwindawo eqaqambileyo, umthunzi ovela kwilanga elithe ngqo. Ngexesha lokutsalwa kwezityalo, kuyimfuneko ukususa izityalo ezincinane, ezibuthakathaka ngeesisi.
Ukuthenga umthi wesundu entwasahlobo nasehlotyeni, njengoko isityalo sathengiwe ebusika kwiimeko ezigulini zigula kwaye zilahlekelwe ngamaqabunga.
Ukuba izityalo zinciphisa amaqabunga phantsi, ngoko ukutyilisa akunako.
Ukuba iingcebiso zamagqabi ezomileyo, kuthetha ukuba umoya ekamelweni lome kakhulu.
Ukuba amaqabunga omhla aqala ukukhanya kwaye aphelile, isityalo sibhekene nemifanekiso kunye neqondo eliphantsi kakhulu.
Izilwanyana: izilwanyana, isicabucabu, i-mealybug.
Ngaba kunokwenzeka ukwandisa i-orchid wena?
Iintyatyambo ezintle ezingafakwanga ekhaya
Izityalo zangaphakathi: vriesia
Ukusetyenziswa kwe-comfrey kunye nobubanzi bokusetyenziswa kwayo
Indlela yokukhetha uhlobo olufanelekileyo lwekhukhamba
Isonka esinomnandi esonyiweyo
Ukunciphisa isisindo ngebhayisekile: zingaphi iikhalori ezitshisa ibhayisiki?
I-Anti-cellulite ibhande elincinci
Ukutya izinja zeentlobo ezincinci
Iimpawu zonyango kunye nemilingo yazo
Indlela yokukrazula isisu emva kokukhulelwa?
U-Xenia Borodina waba ngumfazi oqaqambileyo kunyaka
I-shortbread "I-Euro 2012 Amabhola"
Yintoni ongayithetha entombazana ngomhla wokuqala?
Indlela yokwenza iKharmesi ngezandla zakho, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Indlela yokuzikhusela ezibandayo
Iinkwenkwezi zokubonisa ishishini kunye neenja zabo
Indlela yokubetha umfana ovela kwintombazana, iindlela
Ukuqiniswa kweeyela kunye nokukhula
Ukholiliyo nge-hazelnut sauce
I-pie yebindi ebhaka